Thunderbird 68.0 dia misy fanatsarana marobe ary fisehoan-javatra vaovao | Avy amin'ny Linux
Thunderbird 68.0 dia misy fanatsarana maro sy fiasa vaovao vaovao
Ny mpanjifa mailaka Thunderbird malaza dia nahazo a vaovao farany izay ampitainy amin'ny kinova vaovao Thunderbird 68.0 IZA tonga miaraka amin'ny endri-javatra vaovao maro, ohatra, izao ny lahatahiry rehetra ao amin'ny kaonty iray dia azo asiana marika hoe vakiana, OAuth2 ho an'ny Yandex azo ampiasaina, ary fonosana fiteny samy hafa dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra mandroso.
Ho an'ireo tsy mahalala an'ity mpanjifa mailaka ity dia tokony ho fantatrao fa mpanjifa mailaka marobe izy io, loharanom-baovao maimaim-poana sy misokatra, mpanjifa vaovao, mpanjifa RSS ary chat novolavolan'ny Mozilla Foundation. Mampiasa ny fiteny XUL interface izy ary apetrakao amin'ny rafitra biraon'ny fizarana Linux isan-karazany.
Vaovao lehibe ao amin'ny Thunderbird 68.0
Ao amin'ity andiany vaovao an'ny Thunderbird 68.0 ity dia misy lisitra fanovana, lisitra, ary fanamboarana vaovao. ny Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe amin'ny kinova teo aloha dia ny plugins dia tsy afaka miasa raha toa ka namboarin'ireo mpamorona plugin izy ireo.
Noho izany dia zava-dehibe ny fiheverana izany izay plugins tsy nampifanaraka dia ho kilemaina rehefa manavao ny kinova Thunderbird 68.0 vaovao.
Afaka mahita izany koa isika Ny interface MAPI izao dia manohana Unicode feno ihany koa. Ary koa, araka ny efa nolazainay tany am-piandohana tao amin'ny Thunderbird 68.0, niara-niasa tamin'ny fanitsiana ireo mpamorona mba hahafahany manolotra fiteny samihafa arakaraka ny resaka.
Ho an'ny Thunderbird 68.0 Ny fametahana dia azo averina miraikitra tsy mila fampidinana indray, ary koa ny fahaizana manamarika ny lahatahiry kaonty rehetra rehefa vakiana ary miaraka amin'ny Keepalive TCP ho an'ny protokol IMAP.
Afaka mihazakazaka tsindraindray ireo sivana. Ny mpanjifa koa dia miaraka amina log sivana nohatsaraina.
Nasongadina ihany koa fa ao amin'ity kinova vaovao an'ny client email vTonga miaraka amina motera fanaovana politika ho an'ny fampiharana Thunderbird mahazatra amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha, mampiasa Windows Group Policy na fisie JSON cross-platform.
Mba hisorohana ny taham-pahalalan'ny mpampiasa tsy ho simbaina, Thunderbird 68 dia mety hampiseho ilay hafatra hoe "Namoaka kinova Thunderbird teo aloha ianao" ary tsy hamela anao hanokatra profil manokana. Ka ny vahaolana amin'izany dia ny fanombohana ilay programa miaraka amin'ny safidy –allow-downgrade options.
Mikasika ireo fanamboarana bibikely izay misongadina amin'ity kinova vaovao ity dia hitantsika ireto manaraka ireto:
Ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny tsanganana filaharana filaharana ao amin'ny "Fikarohana hafatra" dia very taorian'ny famerenana
Fanondroana anarana manerantany izay miteraka famoahana CPU avo lenta amin'ny toe-javatra sasany
Ireo labela voafaritra ao anaty lahatahiry IMAP dia tsy hitan'ny mpampiasa hafa indraindray
Tsy nesorina ny teny miafina SMTP rehefa voafafa ny kaonty na novaina ny mpizara na ny solonanarana
Ny fiovana avy amin'ny Mbox mankany amin'ny Maildir dia tsy mandeha raha alefa ny fampidirana fikarohana Windows
Ireo hafatra dia tsy nesorina tao amin'ny folder Trash niaraka tamin'i Maildir. Fanamarihana: ny olana fanesorana hafa mifandraika amin'ny Maildir dia mety mbola hitohy.
Rehefa tsy nahomby ny fandefasana hafatra noho ny olana ara-piarovana dia "lesoka tsy fantatra" ihany no naseho. Ankehitriny, omena antsipiriany bebe kokoa.
Kalandrie: ny fifandraisana marobe amin'ilay mpizara CalDAV mitovy amin'ireo mpampiasa samihafa dia tsy mandeha
Kalandrie - Ny tahirin-kevitry ny faritra izao dia mety ahitana fanovana taloha sy ho avy. Ny fanovana ny faritry ny fotoana fantatra rehetra manomboka amin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 2022 dia tafiditra ao.
Chat: Isaky ny resadresaka, ny fiteny fanaraha-maso tsipelina iray dia azonao fidina izao
Farany dia zava-dehibe ny milaza an'izany ireo izay te-hanavao ity kinova vaovao ity na ireo izay te-hametraka azy amin'izao fotoana izao tsy mbola nomena fonosana fametrahana voaomana amin'ny fizarana Linux samihafa fa fonosana tokana omena ho an'ny fametrahana ankapobeny.
Raha ho an'ny Windows kosa dia omena fonosana 64 msi kely.
Ka ny fanavaozana mandeha ho azy dia kasaina hampiharina amin'ny Thunderbird 68.1 Mba hisintomana ny Thunderbird 68.0 mivantana, mandehana fotsiny rohy manaraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Thunderbird 68.0 dia misy fanatsarana maro sy fiasa vaovao vaovao
Ovidio Villar Marcos dia hoy izy:
Ny fampirimana XXXXXX.default dia miseho ho XXXXXX.default-release.
Tsy mamela ny hamoaka mombamomba ireo kinova taloha. Misy fomba hanaovana izany ve? Misaotra anao.
Valiny tamin'i Ovidio Villar Marcos
Mahagaga ny lalao ataon'ny miaramila voalohany sy ny vahiny
Ny rohy 2.20 dia eto miaraka amin'ny fanohanan'i Haiku sy ny fanamboarana bibikely